Shirkadda Samsung oo lagu xukumay inay bixiso lacag magdhow ah oo gaaraysa $1billion oo dollar. – Radio Daljir
Agoosto 25, 2012 2:14 g 0
USA-Aug-25-2012-Shirkaddatechnology-yadda ee Samsung ayaa lagu heley dambi ah in ay xadday mid ka mid ah naqashadaha shirkadda kale ee Apple oo ay dhinaca waxsoo saarka ku baratamaan.
Maxkamad kutaalla dalka Maraykanka oo dhawaanahaanba ay hortaallay dacwadda la xiriirta in Samsung ay si bareer u soo saartay qaar ka mid ah naqshadaha Apple ay caanka ku tahay gaar ahaanna mobile-ka I phone ayaa haatan xukunkeeda kusoo gabagabeeysay in shirkadda Samsung ay ku cadaatay in dambigaasi ay gashay sidaas awgeedna ay bixiso lacag magdhow ah oo dhan 665 million oo yuuro, oo u dhiganta $1billion oo dollar.
Gartan waxaa lagu qaaday maxkamadda Gobolka California ee dalka Mareykanka waxaana gudiga maxkamadda oo ka koobnaa 9 xubnood ay mid walba oo labada shirkadood ka mid ah weydiiyeen 700 oo su?aalood intii ay dacwaddu socotay.?
Doodda kusaabsan dacwaddan ayaa dad badan oo ah taageerayaasha iyo saamileyda shirkadahaasi ay aad u sugayeen mudadii ay socotay taasoo xukunka haatan kudhacay Samsung ay u arkaan mid horseed u noqon kara in shirkadaha isku shaqadaahi aysan isku xad gudbin.
Apple iyo Samsung waa labada shirkadood ee caalamka ugu soo saarka badan technology-yada casriga ah, gaar ahaanna Mobilelada ugu qaalisan suuqyada dunida iyo Computerada ugu quality-ga badan.